Su'aal: Xanuun in muda ah iga haayo dhinaca Bidixda?
Author Topic: Su'aal: Xanuun in muda ah iga haayo dhinaca Bidixda? (Read 2600 times)
« on: January 29, 2015, 10:06:30 PM »
Asc. waad mahadsan tihiin marka hore Alle ajir ha niga siiyo gargarkaad umada u gargareysiin.
Suasheyda waxaa waaye: Xanuun in muda ah iga haayo dhinaca Bidixda.
-Calamadah aan dareemo waxaa waaye guleel jirka ah i mean like hur ama olal jirka ah iyo xanun lafta feerah ah(taqfasha hoosteda feerah ku yaalo ilaa garabka hostiisa) marka xanunkas waxaa dareemaa markan u jiifto iyo markan rajastiinka xerto lkn hada hanuunkii inta badan waxuu u wareegay Sinta ilaa jilibka gadashiisa meesha laabanto. Xanunkas Sinta waxaa dareemaa markaan fadhiyo 20min iyo markaan jiifanayo. Marka maxuu noqon karaa xanunkas maxaana igula talineysiin.. Jzaakallahu khauran
Re: Su'aal: Xanuun in muda ah iga haayo dhinaca Bidixda?
« Reply #1 on: January 31, 2015, 01:27:11 PM »
Muddada aad xanuunsan tahay waa imisa?
Ma leedahay qufac, neefsashada oo ku dhibto?
Ma leedahay wadna garaac iyo daal dhakhso ah? Miisaankaaga waa imisa?
Wax xanuuno kale oo isku ogtahay miyaa jira sida dhiig kar, sokor, kolestarool, xanuun lafaha sida riixa ama roomaatiisam ama xanuun-ka qanjirka thyroid?
Ma jiraan daawooyin aad qaadatid hadda?
Fadlan su'aalahaas ka soo jawaab si aan fikrad uga helno xanuunkaaga.
« Reply #2 on: February 03, 2015, 10:52:34 AM »
Xanuunkaan dhinaca bidixda ah waxuu i haaye 6bil inta uu uwareegin sinta. Laakiin 2Bil waxuu xanunkii iga batay Sinta.
Ma lihi qufac. neefta ima dhibto.
Haa waa leeyahay wadna garaac, marka qaarna waxaa dhareema wadna inuu laciif i yahay laakin markasto mahan ..Haa waan daalaa cayoow.
Miisankeyga waa 58. Xanuunas midkood ma qabi aad i weydiisay laakiin helekobakteria ayaa qabay oo liga daaweeye.
« Reply #3 on: February 04, 2015, 04:54:24 PM »
Xanuunada guurguura ee marba meel kaa qabto waxyaabo badan ayaa keeni kar, ee waxaa habboonaan lahayd in aad la xiriirto takthar cudurrada guud si uu safiican kuu wiisiteeyo qeybaha jirkaaga oo dhan si loo ogaado meesha xanuunka uu kaaga badan yahay iyo waxyaabaha keeni karo, maxaa yeelay way adagtahay in warbixintaada kaliya lagu ogaado meesha xanuunka kaa heesto.
Laga yaabo in ay noqoto xanuun murqaha ah ama lafaha ama xanuun la xiriiro hormoonada jirka ama xanuun kale intaba.
Fadlan la xiriir takhtar aqoon leh, caafimaad ayaan kuu rajaynayaa.
Views: 12689 August 10, 2015, 11:08:40 AM
Views: 10125 September 16, 2016, 09:11:55 PM
Views: 6009 April 13, 2017, 11:46:51 AM
Views: 21135 March 09, 2011, 10:28:48 PM
Views: 11763 December 23, 2010, 07:28:23 PM